Ifulethi elihle nelasemaphandleni enkabeni yedolobha - I-Airbnb
Ifulethi elihle nelasemaphandleni enkabeni yedolobha
I-Mama T'íka iyifulethi elincane elizimele, elingaphakathi kwendlu yendabuko endaweni yaseSan Blas, enye yezindawo ezinhle kakhulu nezomlando waseCusco, amabhulokhi amabili ukusuka ePlaza de San Blas nezine ukusuka ePlaza de Armas. Ifulethi liyi-loft encane futhi ethokomele enazo zonke izinsiza zokuhlala kamnandi: indawo ephephile, ikhishi eligcwele, umbhede wosayizi wendlovukazi nesinye isikwele esisodwa nesigamu, i-cable TV & net, isomisi sezinwele kanye nevulandi ongayijabulela ikakhulukazi. izinsuku libalele.
Indlu efulethini itholakala eSan Blas, esinye sezifunda ezinomlando eCusco. Imigwaqo yayo emincane, izindonga ze-adobe neminyango yamatshe ikumema ukuthi uhambe. Eduze uzothola izindawo zokudlela ezimbalwa nekhofi elimnandi. Iyindawo ekumema ukuthi uthokozele umlando osuka edolobheni ngokuhamba ngezinyawo.
4.97 · 111 okushiwo abanye
Sihlala endaweni eyodwa futhi sisebenze eCusco iminyaka engaphezu kwengama-20. Umsebenzi wethu useduze kakhulu ngakho-ke siqinisekisa ukutholakala ukuphendula noma imiphi imibuzo.